Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Téléchargements – 3k.
Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay kattolika. Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema. Demander vous-mêmes les chansons et écoutez-les avec cette App de Radiovazogasy. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Nahoana no tezitra ianao? Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko. Indro, ao an-day izy.
Fa hoy kosa Jakoba: Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io.
Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Isaka taminy: Dia nanaiky ny rahalahiny. Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora?
Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao.
Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. Inty aho; iza moa ianao, anaka?
Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Ary hoy kosa izy: Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin’ny sabatra? Fa hoy kosa ravehivavy: Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia pdr aho.
Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.
Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Hira Katolikq – Catholic songs. Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany.
Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin’ny hazan’ny zanany, mba hitsofan’ny fanahinao rano ahy. Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Angamba roa-polo no ho hita pdt.
Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako? Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.
Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; baibooly aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky pf lanitra.
Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Efa hitanay baibooy fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.
Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.